महिमा को Grodno Mound एक छ स्मारक, जो महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध समयमा मृत्यु भएको fatherland, को रक्षक को स्मृति मा erected। यसलाई त्यहाँ सैन्य उपकरण को एक प्रदर्शनी छ को खुट्टा मा एउटा सानो mound छ। शीर्ष चढ्नुहोस्, खासगरी ट्रेल्स सुसज्जित गर्न सकिन्छ।
महिमा को Mound अन्तिम शताब्दीको 60-एँ को दोस्रो आधा देखियो। बुकमार्क स्मारकका 17.09.1968 गरिएको थियो। ऐतिहासिक स्मारक को महान् खोल्ने 09/17/1969 मा स्थान लियो। सम्झनाको जटिल गर्ने BSSR संग देश को पश्चिमी भाग को reunification लागि महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, को अक्टोबर क्रान्ति र नागरिक युद्ध मा बेलारुस लागि लडिरहेका मृत्यु सिपाहीहरूले सम्झना गर्न erected थियो। यो उद्देश्य लागि, जनसंचार चिहानहरू सोभियत संघ, लाल सेना र Grodno क्षेत्र को प्रत्येक जिल्ला को हीरो को पृथ्वीमा ल्याइयो। ऐतिहासिक स्मारक जटिल को निर्माण को लागि यो एक वर्ष भन्दा कम गरे।
Grodno महिमा Mound एक संक्षिप्त कोन को आकार मा बाहिर राखे। आफ्नो उचाइ - 18 मीटर र आधार व्यास - 56 मीटर। स्मारक जटिल बाहिरी पक्ष plastered सामना मा छ जो अखंड ठोस रिङ edged। ऐतिहासिक स्मारक स्थित rallies क्षेत्र को पूर्वी भाग मा; यो बायाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ अनन्त ज्वाला, एक Commemorative लेखिएको एउटा प्लेट - र सही। को mound शीर्ष2सीढी छन्। स्मारकका जटिल अर्को नायक र सैन्य उपकरण को प्रदर्शनी को गली स्थित छ।
स्मारकका नजिकै आज देख्न सकिन्छ:
छ-2 भारी सोभियत ट्यांक।
Isu-152: ponderous सोभियत आत्म-चालित तोप एकाइ।
छ-3: सोभियत ट्यांक उत्पादन; उहाँले शरीर को frontal क्षेत्रमा एउटा असामान्य आकार, त्यसैले "पाइक" भनिन्छ छ।
टी-62: 1961-1975 मा गरियो जो औसत सोभियत ट्यांक।
BRDM: बख्तरबंद फौजको जाचबुभ्क र गस्ती वाहन।
BTR-60: सोभियत Armored कर्मियों वाहक उत्पादन।
31-K: बन्दूक विरोधी विमान कम उडान शत्रु विमान विरुद्ध सुरक्षा गर्न प्रयोग भएको थियो कि।
BMP-1: सोभियत पैदल मिसिन कर्मियों को अगाडि किनारा गर्न परिवहन लागि किस्मत झगडा।
महिमा को Mound मा पार्क उपकरण नयाँ प्रदर्शनी थपियो
Grodno मा स्मारक जटिल को क्षेत्र मा यस वर्ष को अप्रिल 10 मा ल्याए आईतबार-24MR। नयाँ प्रदर्शनी सैन्य उपकरण को एक संग्रह मिलती। "स्काउट" को 116th एयर बेस रस गाउँ (Volkovysk जिल्ला, Grodno क्षेत्र) संग Baranavichy देखि ल्याइयो। 09/05/2014 प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी उपस्थिति मा ल्याइयो। विशेषज्ञहरु एक सामरिक फौजको जाचबुभ्क विमान आईतबार-24MR वर्ग Grodno मा महिमा को Mound छ स्मारकका जटिल, एक योग्य आभूषण बन्न गर्नुपर्छ कार्यकारी समिति बताए। कथा विमान, यसको सुविधाहरू, मा-साइट सेवा जानकारी एक विशेष प्रस्तुत छ जानकारी अडान, को प्रदर्शनी नजिकै स्थित छ जो। Su-24MR आफ्नो मातृभूमि रक्षा गर्न युद्ध मा मरेका को बेलारूसी पाइलटहरूले को एक रिमाइन्डर छ। नयाँ प्रदर्शनी - सबै सैन्य पाइलटहरूले आदर को एक ऋण। रूसी "जासूस" बारे ऐतिहासिक जानकारी: आईतबार-24MR एक रूसी सामरिक फौजको जाचबुभ्क विमान छ। यो एक व्यापक अन्वेषण दिन र रात दुवै सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको छ। पहिलो परीक्षा 1980 को शरद ऋतु मा सुरु गरेका थिए। युद्घ सामांग्री विमान 1984 मा प्राप्त, र एक वर्ष पछि वायु सेना आफ्नो प्रसव थाले।
बेलारुसी रिपब्लिकन युवा संघ महिमा को Mound सुसज्जित योजना
निकट भविष्यमा Grodno Oblast कार्यकारी समिति Grodno मा स्मारक जटिल बारेमा युवा को निर्माण को सुरु अनुमोदन गर्नै पर्छ। महिमा को Mound reconstructed गरिनेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, परियोजनाको कार्यान्वयन बारे 30 अर्ब बेलारूसी rubles आवश्यक हुनेछ। rubles। स्मारकका वरिपरि Commemorative inscriptions ट्रयाक, greenery, ग्रेनाइट स्लैब अपडेट छन्। यसलाई सैनिक-internationalists Grodno, जो अफगानिस्तान मा आफ्नो सैन्य कर्तव्य पूरा मृत्यु को स्मृति मा एक गोरेटो सिर्जना गर्न योजना छ। महिमा को Mound को युवा युवा संघ को निर्माण साइट हुनुपर्छ। यसको नवीकरण देश को विजय को 70th वार्षिकोत्सव द्वारा सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय अधिकारीहरूले यसको क्षेत्र Commemorative घटनाहरु, सैन्य-देशभक्ति योजना प्रचार संगठित सक्छ भनेर जटिल आधुनिकीकरण गर्ने चाहन्छु। को ब्यारो यो वर्ष को वसन्त मा कस्मेटिक मरम्मत र landscaped सेरोफेरो गरे।
Grodno मा स्मारक स्मारक प्राप्त कसरी?
महिमा Mound मा स्थित छ Cosmonauts को एवेन्यू (Grodno, Grodno क्षेत्र)। Grodno ऐतिहासिक स्मारक ड्राइभ 20 बस, संयंत्र गर्न सडक Dombrowski देखि निम्नानुसार जो №। यो स्टप "महिमा को Mound" भनिएको छ।
स्मारकका र यसको उपस्थिति को इतिहास मात्र Grodno वसोवास रोचक छन्। स्मारक बेलारुस र विदेश विभिन्न भागबाट मानिसहरू पराउँछु आउँछन्। मिन्स्क देखि ब्यारो गर्न एक दिन एक पटक हिंड्न रेल वा 057B 077SCH द्वारा पुग्न सकिन्छ। औसत यात्रा समय6घण्टा छ। खैर, मास्को देखि रेल 077SCH गर्नुपर्छ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग कोर्ट मण्डप कहाँ छ
साइप्रस लागि प्रावधान र उत्पादन समय प्रतिक्रिया। साइप्रस लागि आफ्नो प्रावधान कसरी बनाउने
पीसा को टापुमा ग्रीस मा युवा छुट्टी
जर्मन उद्योग। यो के ज्ञात छ?
कसरी खिलौने संग मिसिन पिट्न: केही चाल
Algomenorrhea - यो के हो?
किन नाकहरू फैलिएका छन्?
जिप्सम स्टोन: मानव जीवन को स्कोप
फोर्ड फोकस 2, सुविधाहरू
पखाला लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय